ကျွန်ုပ်၏ကီးဘုတ်သည် OS X El Capitan တွင်ကိုယ်တိုင်ရေးသားခဲ့သည် ငါက Mac ကပါ
ကျွန်ုပ်၏ကီးဘုတ်သည် OS X El Capitan တွင်အရူးဖြစ်နေသည်။ ဒီမှာဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ?
လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်က OS X El Capitan ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးနောက် Yosemite မှလာသည့်ဆော့ဖ်ဝဲနှင့်အတူအမှားအယွင်းများနှင့်သဟဇာတဖြစ်မှုများထွက်ပေါ်လာခြင်းကြောင့် Apple သည်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည့်စနစ်သို့အဆင့်မြှင့်မှုများအသေးစားကိုလျင်မြန်စွာဖြန့်ချိစေပြီးပြsolveနာကိုဖြေရှင်းနိုင်သည်။ တတ်နိုင်သမျှ။ အထူးသငါအမှားအယွင်းများဆိုလို Spotlight အညွှန်းကိန်းတွင် Microsoft Office 2016 suite ကို သို့မဟုတ်အသုံးပြုသူအကောင့်များတွင်။
သို့သျောလညျး, ယခုတိုင်အောင်ပို။ ပို။ ဖြစ်လျက်ရှိသောပြproblemနာတစ်ခုအကြောင်းပြောဆိုခြင်းမရှိသေးပေ အများစုက Apple ၏ပံ့ပိုးမှုဖိုရမ်များတွင်မှတ်ချက်ပေးသည်ငါအထူးသဖြင့်ကီးဘုတ်သည်၎င်းကိုရပ်တန့်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေမရှိဘဲ“ တစ်ယောက်တည်း” စာရိုက်ခြင်းကိုဖြစ်စေသော bug တစ်ခုအကြောင်းရည်ညွှန်းနေခြင်းဖြစ်သည်။
အပြုသဘောဆောင်တဲ့အပိုင်းကဒီပြသနာကိုအလွန်တိကျတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဘယ်တော့မှပြန်ထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်သည် စနစ်လှုပ်ရှားမှုမှပြန်လည်ရောက်ရှိ အသုံးပြုသူစကားဝှက်ဖြင့် login မျက်နှာပြင်ပေါ်လာမည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်စက္ကန့်အနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်းစရာမလိုဘဲမည်သည့်သော့ကိုမဆိုနှိပ်လျှင်၊ ကီးဘုတ်သည်အလိုအလျောက်ကွင်းဆက်ထဲသို့ ၀ င်ပြီးတစ်ယောက်တည်းစတင်ရေးသားလိမ့်မည်။ ဤအခြေအနေမျိုးတွင်၊ ကွန်ပျူတာကိုပြန်လည်စတင်ရန်စကားဝှက်ကိုထည့်သွင်း။ session ကို ဝင်ရောက်၍ မရပါ။ ၎င်းသည်ပါဝါခလုတ်ကို နှိပ်၍ ကိုင်ထားခြင်းဖြင့် Mac ကိုပထမဆုံးအကြိမ်တိုက်ရိုက်ပိတ်ထားလိမ့်မည်။
ဤပျက်ကွက်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုရောက်ရှိနေသောကြောင့် system တစ်ခုလုံးကိုပြန်လည်တပ်ဆင်ရန်အလွန်ကြီးလေးသောအလုပ်ကိုတောင်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့သည် အမှု၌ကအထူးသဖြင့်ပျက်ကွက်ခဲ့သည် ငါ့ကိုသာဖြစ်ပျက်ခဲ့သည် ... ။ Meeeecc! ... မှား! Apple support ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်အသေးစိတ်ဖိုရမ်များကိုပိုမိုလေ့လာခြင်းအားဖြင့်ဤအမှားနှင့်အတူသုံးစွဲသူများပိုမိုများပြားလာသည်ကိုသင်မြင်တွေ့ရသည်မှာစနစ်၏မကောင်းသောတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်သော်လည်းကောင်း၊ OS X ပါသောဘလူးတု protocol သည် (ကြိုးမဲ့ကီးဘုတ်တွင်သာတွေ့နိုင်သည်) ။
စမ်းသပ်မှုများစွာပြုလုပ်ပြီးနောက်အမှားအယွင်းကိုထိုကွန်ပျူတာများပေါ်တွင်သာပြန်ထုတ်သည် Apple ကြိုးမဲ့ကီးဘုတ်နှင့် Magic Trackpad ရှိသည်ကီးဘုတ်နှစ်ခုကိုအပြန်အလှန်ပbetweenိပက္ခဖြစ်စေသည်။ ယခုအချိန်တွင်ဖြေရှင်းနည်းမှာဘက်ထရီများကို keyboard မှဖယ်ထုတ်ခြင်းသို့မဟုတ် Mac ကိုပြန်လည်စတင်ခြင်းဖြစ်သည်။ Apple သည်၎င်းကိုလျင်မြန်စွာဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ ၎င်းသည်ဝေဖန်မှုမရှိသော်လည်း၎င်းသည်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည့် bug တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac OS X ကို » OS X ကိုအယ်လ် Capitan » ကျွန်ုပ်၏ကီးဘုတ်သည် OS X El Capitan တွင်အရူးဖြစ်နေသည်။ ဒီမှာဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ?
မင်္ဂလာပါလွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်က၊ အယ်လ် Capitan အစတွင်ကျွန်ုပ်သည် Jordi Gimenez ကိုသူနှင့်ဤပြသနာကိုကီးဘုတ်နှင့် ဆက်စပ်၍ ဖော်ပြခဲ့သည်။ ငါဘက်ထရီများကိုဖယ်ရှားခြင်းသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာကိုပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်းမှရှောင်ရှားရန်ကျွန်ုပ်ကျင့်သုံးသောအဖြေမှာပိုမိုလွယ်ကူသည်။ ခလုတ်နှိပ်ခြင်း (၃ စက္ကန့်ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်း) နှင့်၎င်းကိုပြန်လည်ချိတ်ဆက်ရန် (ခလုတ်သည် ၃ စက္ကန့်ခလုတ်ကို) နှိပ်ပါ။
အိန်ဂျယ် Salas ဟုသူကပြောသည်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ နောက်ဆုံးတော့ဒီဖြေရှင်းချက်ကိုကျွန်တော်တွေ့ပြီ၊ ငါလည်းဖြစ်သွားတယ်၊ ဒါကပိုဆိုးလိမ့်မယ်လို့ငါထင်တယ်။ မင်္ဂလာပါ
Angel Salas အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာနံနက်ခင်း ... အတူတူပါပဲ ... သူက + + စာဆက်နေတယ်။ ကျွန်တော့်ကီးဘုတ်ကကြိုးမဲ့မဟုတ်ဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်က "ကပ္ပတိန်" ကိုလည်းကျွန်တော်တပ်ဆင်ခဲ့တယ်။ ကီးဘုတ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့ပုံရသည်။ စင်ကြယ်ဖို့ .. မည်သည့်စိတ်ကူးများ?
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မှာ macbook pro ရှိပြီးပြandနာတစုံတရာရှိနိုင်ပါတယ်၊ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ဖြေရှင်းနည်းရှိပါသလား။
Tonatiuh herrera ဟုသူကပြောသည်
ငါကောင်တာကိုရိုက်သည့်အခါကျွန်ုပ်၏ကီးဘုတ်သည်နှေးကွေးနေသည်။ ကျွန်ုပ်၏ iMac ၏အစတွင်အလွန်စိတ်ပျက်စရာကောင်းသည်မှာ၎င်းသည် EL CAPITAN ၏ပconflictsိပက္ခများကို ၀ င်ရောက်လိမ့်မည်။
Tonatiuh Herrera သို့ပြန်သွားပါ
ကျွန်ုပ်နှင့်အတူတူပါပဲ၊ ဒါပေမယ့်ကြိုးမဲ့ကီးဘုတ်နှင့် USB ကီးဘုတ်နှစ်ခုလုံးနှင့်ပါ။ Login ဖန်သားပြင်နှင့်မည်သည့် application တွင်မဆိုစာရိုက်ခြင်းကိုစတင်ပါ။ ငါ (pc မှ) ဘုံ usb ကီးဘုတ်အတွက်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး၎င်းသည်ပြtheနာမရှိပါ။ မဆိုအကြံပြုချက်?
ငါ့မှာ macbook pro ရှိတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်က key command တစ်ခုတည်းအလုပ်လုပ်တယ်။ PSD မှာအလုပ်လုပ်နေတုန်းကျွန်တော့်ကိုသည်းမခံနိုင်တော့ဘူး .. ငါသန့်ရှင်းအောင်လုပ်ပြီးဘာမှမလုပ်ဘူး ... တစ်စုံတစ်ယောက်ကဒီလိုဖြစ်ခဲ့တာလား။
ဒါကငါ့ရဲ့ဖြစ်ရပ်ပါပဲ။ ကီးဘုတ်ပိတ်ထားတာ၊ ဘက်ထရီမရှိတာတို့ရပ်တန့်မသွားဘူး၊ တစ်ယောက်တည်းစာရိုက်နေတယ် !!!! ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲ
Javier Moyano ဟုသူကပြောသည်
ညာဘက်လမ်းညွှန်ခလုတ်ကိုကျွန်တော်တွေ့သည်။ သူသည် Illustrator တွင်အေးဆေးစွာအလုပ်လုပ်ခွင့်မပြုပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်အရာဝတ္ထုများသို့မဟုတ်အလုပ်ဇယားကိုမီနူးအပြင်အဆက်မပြတ်ရွေ့လျားနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Javier Moyano အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ထိုအဖြစ်အပျက်နှင့်အကြိမ်ပေါင်းများစွာပြုလုပ်ခဲ့သည်၊ ဘာမျှမဖြစ်ခဲ့ပါ၊ usb back tab သည် keyboardoooo သာရေးသားနေခြင်းကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုရူးသွပ်စေသည်။
ပိုမိုပေါ့ပါးသည့် 13 "MacBook Air ကို WWDC 2016 တွင်ပြသခဲ့သည်